मन्त्री वर्षमान पुनले सार्वजनिक गरेकाे ऊर्जा मन्त्रालयको श्वेतपत्रमा के छ ? – Nepal News
मन्त्री वर्षमान पुनले सार्वजनिक गरेकाे ऊर्जा मन्त्रालयको श्वेतपत्रमा के छ ?
काठमाडौं, वैशाख २५ । सरकारले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाल’ भन्ने नारालाई साकार पार्ने लक्ष्यका साथ २०७५ देखि ८५ सम्मलाई ‘ऊर्जा तथा जलस्रोत दशक’को रुपमा अगाडि बढाउने भएको छ ।
पाँच वर्षभित्र पाँच हजार मेगावाट
सरकारले आगामी पाँच वर्षभित्र पाँच हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरी राष्ट्रिय प्रसारणमा जोड्ने लक्ष्य राखेको छ । मन्त्री पुनको श्वेतपत्रअनुसार तीन वर्षभित्र तीन हजार मेगावाट मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने, पेट्रोलियम पदार्थको आयातलाई क्रमशः कम गर्दै जाने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ ।
विगतमा घोषणा गरिएकै कार्यक्रमका आधारमा मन्त्री पुनले आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् आन्तरिक खपतका लागि उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको जानकारी दिनुभयो ।
यस्तै थप पाँच हजार मेगावाट क्षमताका आयोजनासमेत आगामी दश वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गरी कूल १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनमा जोड दिने महत्वाकांक्षी लक्ष्य अगाडि सारिएको छ ।
प्रसारण लाइन निर्माणमा जोड
मन्त्री पुनले आज सार्वजनिक गर्नुभएको श्वेतपत्रमा प्रसारण लाइन निर्माणलाई विशेष प्राथमिकतामा राखिएको छ । १३२ केभी र सोभन्दा उच्च क्षमताका प्रसारण लाइनको क्षेत्रमा पर्ने जग्गा भाडामा लिने व्यवस्था गरिएको छ । प्रसारण लाइनबाट प्रभावित घर परिवारलाई विद्युत् आयोजनामा लगानीको विशेष अवसर प्रदान गर्ने नीति लिने व्यवस्था गरिएको छ ।
दीर्घकालीन रुपमा नेपालको पूर्वपश्चिम राजमार्ग र मध्यपहाडी पुष्पलाल लोकमार्गको समानान्तरमा ४०० केभी र ७६५ केभी प्रसारण लाइन निर्माणमा जोड दिइनेछ । यस्तै नदी करिडोरका आधारमा उत्तर दक्षिण ४०० केभी क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माणलाई अभियानका रुपमा सञ्चालन गरिनेछ ।
अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन प्राथमिकतामा
सरकारले अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणलाई समेत विशेष प्राथमिकतामा राखी निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको छ । आगामी चार वर्षभित्र अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनका रुपमा बुटवल–गोरखपुर ४०० केभी लाइन निर्माण सम्पन्न गरिनेछ । त्यस्तै लम्की–बरेली, दुहवी–पूर्णिया र कोहलपुर–लखनऊ ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माणको प्रक्रिया शुरु गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
त्यसैगरी आगामी पाँच वर्षभित्र नेपाल–चीन जोड्ने गल्छी–रसुवागढी–केरुङ प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिने मन्त्री पुनको श्वेतपत्रमा उल्लेख छ । रासस
ट्याग्स: Energy Minsiter Pun, श्वेतपत्र
त्रिविलाई उत्तरपुस्तिकाको शुल्क पुनरावलोकन गर्न सूचना आयोग निर्देशन